Wararka - Soo iibso ayaa beddeleysa Ciyaarta eCommerce
Wax ka beddelka ciyaarta adduunka ee eCommerce, ma jiro oo aan ahayn madal Shopify ah.
Asal ahaan, barnaamijka dukaamaysiga wuxuu ku xiraa dhammaan khibrada dukaamaysiga moobiilka, oo ah, helitaan, lacag bixin, iyo u geyn hal codsi. Macaamiisha ayaa ku soo galaya barnaamijka emayl, iyagoo raacaya noocyada kala duwan ee dukaamaysiga ku shaqeeya ee soo buuxinaya quudinta wararka shakhsi ahaaneed ee alaabada lagu taliyay.
Waxay sameeyaan xulashooyin alaab ah, waxay usocdaan hubinta iyo la socoshada bixinta. Xaqiiqdii, Shopify waa codsi wax ku iibsiga moobiilka ugu habboon xilligan, iyo adeegyada Shopify ee horumarinta websaydhka ayaa sii socda.
Dhismaha Bakhaarka Khadka Tooska ah
Soo iibinta waxaa loo arkaa inay tahay midka ugu wanaagsan eCommerce ee suuqa maanta.
Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso dadka inay dhisaan la kari karo, dukaamada internetka oo leh boqolaal astaamo lagu dhisay iyo tan barnaamijyo ah, Shopify ayaa ah barxadda dukaamaysiga loogu raadinta badan yahay maalmahan. Si toos ah loogu iibiyo badeecadaha iyo adeegyada websaydhka, guud ahaan warbaahinta bulshada iyo suuqyada kala duwan way fududahay Shopify.
Markaad bilaabeysid ganacsiga eCommerce, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad ka walwasho, oo ay ka mid yihiin helitaanka suuqa wax soo saarka saxda ah, soo saarista badeecooyinka, maareynta agabka, iyo sameynta istiraatiijiyad suuqgeyn ah.
Haddii aadan khibrad u yeelan naftaada, tixgeli inaad u oggolaato khabiir, sida wakaaladda horumarinta Shopify inay wax ka qabato dhinaca horumarka ee waxyaabaha. Kireynta horumariye waxay kuu ogolaaneysaa inaad waqti badan ku bixiso farsamaynta dhinacyada kale ee ganacsiga.
Sanduuqa-ka-baxsan, barxadda ayaa ah dhismaha websaydhka eCommerce ee ugu awoodda badan. Waxay leedahay wax kasta oo aad ubaahan kartid aasaasida iyo maaraynta ganacsigaaga. Dukaamo badan oo leben-iyo-hoobiye ah ayaa khadka tooska ah uga socda, halka noocyada caanka ah ee eCommerce ay furayaan dukaamo leben-iyo-hoobiye ah.
Ganacsiga 'eCommerce' maanta, waxba iskumid ma aha sidii ay toban sano ka hor ahayd. Qof kasta oo meherad ku leh qarniga 21aad si dabiici ah ayuu wax uga yaqaanaa Shopify. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay ku baahsan tahay, in yar ayaa gabi ahaanba fahamsan soo celinta weyn ee maalgashiga ay bixiso.
Aasaasayaashii barxada, daruuriga dartiis waxay u horumariyeen kadib markay ogaadeen in ikhtiyaariyadaha e-commerce ee hadda jira aysan ku filnayn iibinta. Waxay la yimaadeen Shopify qaab dhismeedka il furan. Tan iyo markaas waxay kordhisay awoodeeda si loogu daro sifooyinka sida kaqeybgalka isticmaalaha, suuq geynta iyo waxyaabo kale oo badan.
Soo iibso, maxay tahay sax ahaan?
Wadahadalka eCommerce iyo suuqgeynta suuqyada maalmahan, Shopify waa mid ka mid ah xalalka inta badan la soo qaado.
Qof kastaa wuu ku qanacsan yahay heshiiska, laakiin in yar ayaa fahamsan saadka barnaamijka. Si fudud loo dhigo, Shopify waa nooc ka mid ah alaabada barta internetka ee iibka iyo macaamilada eCommerce.
Waa madal u oggolaaneysa kuwa miisaaniyaddoodu xaddidan tahay inay galaan deegaanka eCommerce, waxay u oggolaaneysaa kuwa miisaaniyaddoodu ka weyn tahay inay kobciyaan sumcaddooda, iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan, u oggolow bakhaarrada jireed inay yareeyaan farqiga u dhexeeya ganacsiga qofka iyo iibka internetka, taas oo ay ugu mahadcelineyso Shopify's nidaamka POS lahaansho.
Ganacsiyo badan oo kala duwan, Shopify waa waxyaabo badan, sidaa darteed waxay noqotay mid ku faafaya suuqgeynta internetka ee guuleysta iyo eCommerce tobankii sano ee la soo dhaafay.
Qeybteeda alaabooyinka iyo adeegyada waxaa lagu qiyaasi karaa meherad kasta oo ay leedahay. Iibinta dhijitaalka ah, la-tashiga, iibinta jirka, tigidhada, casharrada, kirada, iyo wax badan oo dheeri ah-Soo iibsiga waxaa loola jeedaa inuu noqdo dukaan hal meel lagu wada istaago dhammaan waxyaabaha eCommerce.
Kuwa doonaya inay noqdaan ganacsade khadka tooska ah, tani waa mid si gaar ah u soo jiidata.
Maxaad ugu dhisi kartaa Shopify?
Baahida iyo baahida loo qabo horumarinta Shopify ayaa ku koray boodbood iyo soohdin. Barxadda ayaa muddo dheer ahayd doorbidista loogu talagalay iibiyeyaasha u tagaya fudaydka iyo astaamaha hodanka ku ah maaraynta dukaamada eCommerce. Soo iibsiga ayaa la socda faa'iidooyinka soo socda:
1. Si qurux badan raalli ahaansho.
Barxaddu waxay leedahay tiro xeeladeysan oo casri ah oo xirfadleyaal ah si ay u dhisaan dukaamo internetka si qurux badan u raalli geliya. In kasta oo ay la socoto mawduucyo qaawan, la shaqeynta Shopify naqshadeeyayaasha horumarinta mawduucyada iyo horumariyeyaashu waxay u keeni doonaan khibrad isticmaale iyo hodan adeegsade booqdayaasha.
2. Isticmaal fudud.
Si ka duwan xalalka kale eCommerce, Shopify wax buuq ah ma leh oo way fududahay in la dejiyo oo loo isticmaalo labada horumariya iyo kuwa aan horumarinaba. Waxay bixisaa softiweer iyo martigelin si loo furo degel. Intaas waxaa sii dheer, iskuxirka maamulka waa mid saaxiibtinimo leh oo dareen leh.
3. Lagu kalsoonaan karo oo aamin ah.
Dhisida iyo maaraynta dukaan onlayn ah oo daryeela macluumaadka isticmaalaha xasaasiga ah, sida faahfaahinta shaqsiyeed iyo macluumaadka kaarka deynta, ganacsade ahaan waxaad jeclaan lahayd inuu noqdo mid la isku halleyn karo oo ammaan ah. Shopify waxay ku duugtaa kuwan iyada oo loo marayo dayactirka joogtada ah iyo casriyeynta.
4. Isdhexgalka arjiga.
Barxadda dukaamaysigu waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u qaabeysid dukaankaaga khadka tooska ah, iyo sidoo kale isku-darka barnaamijyada, adigoo awood u siinaya inaad ku darto sifooyin badan oo hodan ah iyo shaqeyn si aad u xoojiso
5. Xawaare Deg Deg ah.
Faa'iido kale oo loo hayo 'Shopify' waa xawaareheeda degdegga ah sababtoo ah qalabka iyo kombiyuutarka la hagaajiyay. Waqtiga soo dejinta ayaa saameyn weyn ku leh qadka hoose, maaddaama macaamiisha ay u muuqdaan inay ka tagayaan goob qaadata xitaa in ka badan afar ilbiriqsi oo lagu raro. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la aado xalka martigelinta degdegga ah.
6. Qalabka suuqgeynta ee aadka u sarreeya.
Shopify waxay bixisaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka suuq-geynta iyo sidoo kale inay horumariyaan ganacsi. Nooca aasaasiga ah wuxuu bixiyaa dhowr qalab falanqeyn fiican iyo qaababka SEO. Intaa waxaa sii dheer, waxay bixisaa astaamo sida rasiidh qiimo dhimis ah, tirakoobka dukaanka, suuqgeynta iimaylka, kaararka hadiyadda, iyo waxyaabo kaloo badan.
Maxay Platform sida Shopify u tahay mustaqbalka eCommerce
Iibka eCommerce ee adduunka ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro ku dhowaad $ 5 trillion sannadkan gudihiisa ama kan xiga. Jaantusku wuxuu u taagan yahay koror ah 265 boqolkiiba marka la barbar dhigo 2014. Kobaca waxaa si weyn loogu aaneyn karaa fursadaha cusub ee suuqyada adduunka.
Sannadka soo socda, ku dhowaad 20 boqolkiiba iibka eCommerce waxaa loo aaneynayaa macaamiisha dibedda. Waxaa la mid ah saldhigga macaamiisha gudaha maaddaama internetku jabinayo soohdimaha dhaqanka iyo kala qaybsanaanta gobollada. Macaamiisha hadda waxay la macaamili karaan noocyo shisheeye sida waligood, mahadnaqa eCommerce.
Ganacsigu wuu kobcayaa, wuxuuna ubaahan yahay kaabayaal adag oo taageera kobaca aan lala tartamin. Waqtigaan la joogo, dukaamaysiga Shopify iyo Shopify ayaa ah eeyga weyn ee ku tartamaya adduunka eCommerce, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, waxa ka dhigaya mid muuqda oo waxa runta ka dhigaya inta kale waa kala duwanaansho.
Khibrad ganacsi eCommerce waxay kuxirantahay guusha arima kala duwan. Wax kasta oo aad iibineyso, ha ahaato dukaankaaga jireed ama sagxaddaada hoose, eCommerce waa isbarbar dhig weyn. Jeebooyin qoto dheer oo si otomaatig ah ugu eg ganacsiga joogtada ah ma sii jiraan maalmahan.
Maalmahan, nooc isku mid ah, istiraatiijiyad xeel dheer, iyo xitaa dhaq dhaqaaqyo ganacsi oo naxariis leh ayaa u horseedi kara ganacsi soo noqnoqda. Dhibcaha meheradaha sida Shopify, caqabadda gelitaanka adduunka eCommerce waligeed ma hooseyn. Qof kasta oo leh anshax shaqo oo adag, fikrad wanaagsan, iyo xoogaa nasiib ayaa ku guuleysan kara suuqa internetka.
Fursadaha Weyn ee Horumariya Kobaca Mustaqbalka Shopify
In kasta oo barxadda wax laga iibsado ay ka hawlgasho 175 dal oo adduunka ah, haddana waxaa layaab leh in maalgashadayaashu ogaadaan in inta badan iibka la soo saaray ay ku yaalliin Waqooyiga Ameerika. Shirkaddu waxay si adag uga shaqeyneysay ballaarinta gaaritaankeeda caalamiga ah iyo howlaheeda, iyadoo sidoo kale siisay qalab maxalli ah saldhigga ganacsiga adduunka.
Maanta, Shopify waxaa lagu heli karaa 20 luqadood oo kala duwan oo Lacag-bixinta Shopify-ka ayaa ku fiday illaa shan iyo toban dal. Dhamaadkii sanadkii hore, baayacmushtariyaal badan oo adduunka ah ayaa ganacsiyadooda ka bilaabay Shopify.
Shabakada fulinta Shopify ayaa kaliya la gudbiyay sanadkii hore, laakiin tilmaamayaasha oo dhan waxay muujinayaan in mustaqbalka shabakada uu ifayo. Boqolaal kun oo ganacsato ah ayaa muujiyey rabitaankooda ah inay ka mid noqdaan barnaamijka marin u helka. Soo dukaamee tan iyo markaas waxay qaadatay qaab cabbiraad ah, iyadoo lagu darayo kaliya 'daraasiin baayacmushtariyaal' laakiin joogtaynta diiradda la saarayo tayada waxqabadka miisaanka hore marxaladda hore.
Sannadkan wuxuu 'maalgashi culus' u noqon doonaa Shopify, maaddaama ganacsato badan iyo ka badanba ay ka fikirayaan inay maal-gashadaan xalalka Shopify.
Cudurka faafa ee 'Coronavirus', intuu joojinayo meherado fara badan isla markaana saameyn ku yeelanayo malaayiin shaqaale adduunka oo dhan ah, dadku waxay arkeen fursad ay kaga ganacsadaan khadka tooska ah, maadaama xayiraadaha iyo xakamaynta xuduudaha la fulinayo. Iyada oo loo baahan yahay in dadku guryahooda ku ekaadaan, dukaamaysiga internetka ayaa sii ballaadhay.